INDAWO EZIMBINI ZOLWAKHIWO LWASELWANDLE KWILWANDLE ISANTA BARBARA ULUHLU LWEEDOLA EZILI-160 ZEEDOLA - UYILO LWEKHAYA
Indawo ezimbini zoLwakhiwo lwaselwandle kwiLwandle iSanta Barbara Uluhlu lweedola ezili-160 zeedola
Ukuhlala kwiihektare ezingama-22 zolwandlekazi lwepropathi, indawo enye yaseSanta Barbara idweliswe nge-160 yezigidi zeedola, igqityiwe ngeendawo ezimbini zokuhlala. Ikhaya ngalinye limalunga neenyawo ezingama-8,000. Omnye unendawo yokuhlala iindwendwe.
Ukuza kuthi ga ngoku, umhlaba ubizwa ngokuba yiSanctuary eLoon Point kwaye unendawo evulekileyo eyaneleyo yeepasile zomhlaba ezintlanu. Akumangalisi ukuba olu lolunye lwezona zintlu zinkulu kwaye zibiza kakhulu eCarlifonia.
Kukho amarhe okuba abahlali bangoku bachitha ixesha elininzi kwi-East Coast, kwaye ke, bajonge ukukothula iindawo zokuhlala ezingasetyenziswanga kakuhle. Nangona kuninzi esele kwenziwe kwipropathi kule minyaka ilishumi nesiqingatha idlulileyo, yonke loo ndawo ivulekileyo ithetha ukuba kusekho indawo yokukhula.
Umnini wangoku, uBruce Kovner, uqale wathenga umhlaba kule ndawo ngo-2007, efumana iihektare apho anakho. Ngoku unepropathi yehektare ezingama-22 phantsi kwegama lakhe. Ijenali yeWall Street iingxeloukuba iprojekthi yeminyaka eli-14 ixabise malunga ne-110 yezigidi zeedola kuphuhliso lwayo lonke.
ukakayi kunye nomvambo we tattoo
Kweli nqaku sele likhankanyiwe, iziqhulo zikaKovner Iqale kwiihektare ezi-3½ kwaye, ngesichumiso esikhulu, ikhule yaya kuma-22. Ngoku, kukho indawo yamakhaya amathathu ongezelelweyo, amabini kwizikwere ze-12,000 zeenyawo kunye nenye kwi-8000 yeenyawo zenyawo.
imibono yokufudumeza indlu ngamadoda
Ime kwiPasifiki eSanta Barbara, eCalifornia, iimbono ezibanzi zolwandle kunye neentaba ezikufutshane ziyaqiniseka. Kuwo onke amakhaya amileyo ngoku, uninzi lweefestile ezinkulu nezinomtsalane zijongile ngaphandle kwemithombo yendalo enomtsalane.
Kwisiza, abathengi basekhaya banokukwazi ukufikelela kumachibi amakhulu, iicabana, igadi ye rose, kunye necitrus grove. Iipasile sele zidityaniswe yindlela. Oko kwathiwa, i-icing kwikhekhe yabaninzi iya kuba kukufikelela kulwandle lwabucala.
Nokuba ii-domiciles ezimiyo ziyahenda, abatyali mali abaninzi baya kunika ingqalelo ngakumbi kumhlaba ongenamntu wepropathi. Ngendawo yamakhaya ongezelelweyo, kwahlulwa-hlulwa-hlulwa-hlulwa. Ukuba akunjalo, mhlawumbi ngakumbi ukulungiswa komhlaba kuya kulungiswa.
Nangona udweliso lupakishwe ngokufanelekileyo njenge-22-acre endeavor, intengiso inokuqhawulwa. Umzekelo, umthengi unokukhetha ukuthenga elinye lamakhaya kunye neehektare ezili-10 zomhlaba nge- $ 80 yezigidi.
iinwele ezinde ezinesiqingatha zabafana
Iitattoos ezincinci zejiyometri kubafana
USanta Barbara uqobo ngumtsalane omangalisayo. Ihlala ibizwa ngokuba yiAmerican Riviera njengoko iimbono kunye nokubuka ecaleni kweendlela zeSanta Ynez Mountains kusikhumbuza iiposikhadi ezindala ezivela eNice okanye eCannes.
Izinto eziluncedo edolophini zikwanesibheno esikhethekileyo. Inkqubo yesikolo ebalaseleyo kunye nokuma okucacileyo kwendawo kutheni abantu abangaphezu kwama-450,000 bethanda ukubiza iSanta Barbara kunye noluntu olungqongileyo ekhaya. Ngcono nangakumbi, iL.
Ukuba iSanctuary e-Loon ithengiswa ngexabiso langoku lokudweliswa, ekuphela kwento ethengiswayo yokubetha irekhodi elizweni lonke iya kuba yiWarner Estate ethengwe nguJeff Bezos kunyaka ophelileyo ngezigidi ezili-165 zeedola.
Bona ngakumbi malunga - I-Tech Tycoon idonsa i-30 yezigidi zeedola kwiNdlu yeCalabasas
Izitayile ezinde zedreadlocks zabafazi
umvambo kwicala lengalo
Imibono yesiqingatha semikhono yamabhinqa
unganxiba izihlangu ezimdaka ngesuti engwevu